होटल पुगेका एक वृद्ध बाबु र उनका छोराको यो कहानी, जसलाई पढ्दा तपाईं पनि भा’वुक बन्नुहुनेछ – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार ०९:१८ Basanta Khanal	0 Comments	HeartTouching
एउटा छोराले आफ्नो वृद्ध बाबु लाई रात्रि भोजनको लागि एउटा राम्रो रेस्टुरेन्टमा लिएर गयो । खाना खाने बेलामा ती वृद्धको धेरै पटक खाना आफ्नो कपडामा पो’खियो । रेस्टुरेन्टमा खाना खानको लागि बसेका सबै जनाले ती वृद्धलाई घृ’णित नजरले हेरिरहेका थिए ।
तर उनको छोरा भने एकदम शा’न्त थियो ।खाना खाइसकेपछी केहि लाज नमानी वृद्ध बाबुलाई वा’शरुम लिएर गयो । वृद्ध बाबुको कपडामा लागेको खाना सबै सफा गरिदियो, अनुहार सफा गरिदियो, कपाल को’रिदियो र वृद्ध बाबुलाई चस्मा लगाइदियो त्यसपछि बाबुलाई बाहिर लिएर आयो ।
सबै जना अचम्म मानेर हेर्दै थिए ।त्यसपछि उसले बिल भुक्तान गर्यो र वृद्ध बाबुलाई लिएर बाहिर आउदै थियो ? त्यही रेस्टुरेन्टमा खाना खान बसेका एउटा वृद्धले उसलाई आवाज लगाए र उसलाई सोधे-बाबू तिमिलाइ लाग्दैन तिमी यहाँ केही छोडेर जादै छौ ??उसले जवाफ दियो-हैन सर ।
मैले केही पनि छोडेको छैन। वृद्धले भने-बाबू तिमिले यहाँ प्रत्येक पुत्रको लागि एउटा शिक्षा स’बक अनि प्रत्येक मातापिताको लागि उ’म्मीद छोडेर जादै छौ ।उसले जवाफ दियो- प्रायःजसो हामी बृद्धा आमाबाबुको साथमा बाहिर जानको लागि श’र्म मान्छौ। सङ्गै गएर के गर्छौ राम्रोसँग हि’ड्न पनि आउदैन ।
राम्रोसँग खान पनि जन्दैनौ तिमीहरु त घरमै बसेको सु’हाउँछ भन्छौं ।तर तपाइँहरूलाई के थाहा जब तपाईंहरू सानो हुनुहुन्थ्यो तपाईंको मातापिताले तपाईंलाई आफ्नो काखमा लिएर बाहिर जानू हुन्थ्यो । तपाईं त्यति बेला ठिक सङ्ग हिड्न पनि सक्नु हुनि थिएन ।ठिक सङ्ग खान पनि सक्नु हुनि थिएन । त्यो बेला तपाईंलाई आफ्नो मातापिताले आफ्नै हातले खाना खुवाउनु हुन्थ्यो ।
खाना पो’खियो भने गा’ली हैन मायालु तरिकाले सम्झाउनु हुन्थ्यो ।अनि त्यही मातापिता बु’ढेसकालमा कसरी बो’झ ला’ग्नु भयो ?मातापिता भगवानको रुप हुन् । उनीहरुको सेवा गर्नुस् । माया दिनुहोस् किनकि एकदिन हजुरहरु पनि बृद्ध हुनुहुन्छ । आफ्नो माता-पिताको सधैं सम्मान गर्नुस.. (सामाजिक सञ्जालबाट)
← पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज – ०३ आषाढ २०७८ बिहिवारको राशिफल पढौं
अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरोले निजी क्षेत्रका डेढ दर्जन जलविद्युत आयोजनालाई क्षति →